Chance or Choice | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Chance or Choice
Posted by Mr. MarGa on Feb 26, 2015 in Arts & Humanities, Drama, Essays.., My Dear Diary | 43 comments
တာဝတိံသာမှ အက်ဆေးများ ဦးမာဃရဲ့ မှတ်စုများ
ဒီနေ့ ထုံးစံအတိုင်း လိုင်းပေါ်မှာ ဟိုမွှေဒီမွှေလုပ်ရင်း စကားလုံးလေး (၂)လုံးကို သွားတွေ့တယ်
By choice နဲ့ By chance တဲ့
ဖတ်ရင်းနဲ့ ရောလာတာမို့ နည်းနည်း ပိုပြီး ရေရေရာရာသိချင်တာနဲ့ ဟိုဂျီးဒေါ်ကို သွားမေးလိုက်တယ် (ပုံမှန်ဆို ကိုယ်တိုင်ရှာနေကျပေမယ့် နည်းနည်း အပျင်းဓာတ်ဝင်နေလို့)
သူ့ကိုမေးမှ သူပါ လည်ထွက်သွားသလားမသိပါဘူးဗျာ ရှင်းရင်း ရှုပ်နေရော
အဲ့လိုပြောနေရင်း ဘယ်နားက ရှာလာတယ်မသိ စာလေးတစ်ပုဒ် ပို့လာတယ်။ (အဲဒီစာကိုဖတ်လိုက်တာ အစက သိချင်နေတဲ့ကိစ္စလေးတောင် မေ့တေ့တေ့ဖြစ်သွားတဲ့အထိ)
ဆိုတော့ အဲဒီစာလေးဖတ်ပြီး ပြန်ချပြချင်စိတ်ပေါက်လာတာမို့ မတောက်တခေါက် ဘာသာပြန်စွမ်းရည်နဲ့ ပေါင်းပြီး ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ (အင်္ဂလိပ်လိုက ပိုလှတယ်၊ ကျနော် ဘာသာပြန်လိုက်တာ တချို့နေရာတွေ ကပေါက်ကချော်ဖြစ်နေတယ်)
When we meet the right person to love when we’re at the right place at the right time, that’s chance.
Being caught up inamoment (and there’salot of couples who get together because of this) is notachoice. That’s alsoachance.
The difference is what happens afterwards. When will you take that infatuation, that crush, that mind-blowing attraction to the next level?
That’s when all sanity goes back, you sit down and contemplate whether you want to make this intoaconcrete relationship or justafling. If you decide to loveaperson, even with his faults, that’s notachance. That’s choice.
But true love that lasts is trulyachoice. A choice that we make.
Regarding soul mates, there’sabeautiful movie quote that I believe is so true about this: “Fate brings you together, but it”s still up to you to make it happen.”
သင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ရှိနေချိန် ကိုယ်နဲ့ အံကိုက်ဖြစ်မယ့်သူမျိုးကို ချစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ မတော်တဆ ရရှိတဲ့ ကံကောင်းမှုတစ်ခုပေါ့
စွဲစွဲလမ်းလမ်း ဖြစ်သွားမိတဲ့သူတစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ရင်လည်း ဒါဟာ ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး မတော်တဆပါ။
ဖြတ်ခနဲ တွေ့မိတဲ့ခဏမှာ အရူးအမူး စွဲလမ်းသွားတတ်တာမျိုးကလည်း (စုံတွဲအများစု ကြုံတတ်တဲ့ပုံစံ ဖြစ်ပေမင့်) ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု မဟုတ်ပြန်ဘူး၊ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ မတော်တဆ ဆုံစည်းခြင်းပဲ။
နောက်ဆက်တွဲ ထပ်လာမယ့် ကိစ္စတွေကတော့ အမှတ်တမဲ့ မတော်တဆတွေ မဟုတ်နိုင်တော့ဘူး။ တဒင်္ဂ ဆုံတွေ့မှုကနေ နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကို ဆက်သွားဖို့ ကြံစည်နေမိပြီ။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဝင်လာတာပဲ။ ရိုးမြေကျ လက်တွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလား ဒါမှမဟုတ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အပျော်သက်သက်လားဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်လေ။ တကယ်လို့ အဲဒီလူမှာ အားနည်းချက်တွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတာတောင် ဆက်ပြီး လက်တွဲသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာ မတော်တဆ မဟုတ်တော့ဘူး ကိုယ်တိုင်ရွေးလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်သွားပြီ။
ရှေ့ဆက်ရမယ့် လမ်းခရီးမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံပစေ သူ့လက်ကိုတွဲပြီး ဆက်လျှောက်ဖို့ တွေးလိုက်တာမျိုး
သူ့ထက် သာတဲ့သူတွေ တပုံကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရဲ့နဲ့ ဒီတစ်ယောက်ကိုပဲ ပိုပိုတိုးပြီး ဆက်ချစ်နေမိတာမျိုး
တဒင်္ဂ စွဲလမ်းမှုတွေ၊ တိတ်တခိုး သဘောကျမိတာတွေ၊ မြင်မြင်ချင်း စိတ်ဝင်စားမိတာတွေဟာv အကြောင်းကံကြောင့်၊ အမှတ်တမဲ့ မတော်တဆ ဖြစ်တည်လာတာတွေ။
ဒါပေမယ့် တကယ့် အချစ်စစ်ကတော့ ရင်ထဲ အသည်းထဲကလာတဲ့ ရွေးချယ်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး ထွက်လာတာပဲလေ။
လက်တွဲဖော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်သားမိနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက စာသားလေးတစ်ခုက “ကံကြမ္မာက မင်းတို့ကို ဆုံစည်းပေးရုံသက်သက်ပဲ၊ ရှေ့အနာဂတ် လမ်းခရီးဟာ ကိုယ်တိုင်ဆက်ဖောက်ရတာ” တဲ့။
ကိုယ့်ကို တကယ်နားလည် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ လက်တွဲဖော်တွေ တကယ်ရှိတယ်။ နှစ်ယောက်တစ်ကမ္ဘာ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဖြစ်တည်လာတဲ့သူတွေချည်းပါ။ ကံကြမ္မာက ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ရှေ့မှောက်အရောက် ဆောင်ကြဉ်းပေးတာချည်း။ ဒါပေမင့် သူနဲ့တွဲပြီး ဘဝခရီးကို ဆက်လျှောက်ဖို့ မလျှောက်ဖို့ ဆိုတာက ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။
မှတ်ချက်။ ။ စာကို စာအတိုင်းသာ ဖတ်ပြီး ခံစားချက်များနှင့် မရောကြပါရန် အလေးအနက် သတိပေးအပ်ပါသည်။
ကံကြမ္မာက သဘောကောင်းလွန်းပြီး ၄ ယောက် ၅ယောက်လောက် ကိုယ့်ရှေ့ချပေးတာ မို့
ဘူသူ့ ရွေးရ မယ် မသိလို့ မဲနှိုက် ရွေး ပြီး ကျ ချင် တဲ့ သူ ကျ ပေရော့ ….
ဆိုရင်ကော ကိုဖိုးသိကြား လေး။
ကံကြမ္မာက တကယ်သဘောကောင်းသဗျ။ တချို့တချို့တွေကို ဆယ်ယောက်လောက်တောင် ချပေးတာကလား
ဇာတ်သိမ်းခန်း နားမယ် မမြဝင်း မျက်လုံး ကို အဝတ်စည်းပြီး ပုဝါ ဆွဲခိုင်းတာလေ။
ဟို မင်းသား နှစ်ယောက် မှာတော့ 50-50 Chance ကို မျှော်နေရတာ မဟုတ်လား။
Choice ဖြစ်ဖြစ်၊ Chance ဖြစ်ဖြစ် CHANGE ဖြစ် ဖို့ ကို မျှော်နေ ကြတာပါဘဲလေ။
CHANGE မဖြစ်ချင်ရင် ဘာမှ Choice လုပ်စရာလဲ မလို၊ Chance ကိုစောင့် စရာလဲ မလို။
ဆိုတော့ တရားခံ မိပြီ။
CHANGE လိုခြင်းကြောင့် ဒီလို ရှုပ်နေတာ ဘဲ။
ဆက်တွေး ကွာ။ lol:-)))))
CHANGE ဖို့အတွက် လုပ်နေတာက
unfreeze ကနေ မတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်လေ
ပါးစပ်ကသာ အော်နေတာ လက်တွေ့မှာ change မှ မchange တာ
နာ မရှုပ် ပါဘု
နိ သာ ရှုပ်တာာာ
ဒီ ကိစ္စ ကို ပြောတာ။
နာ က မရှုပ်ပါဘူးးး
မဆိုင် ဆိုင်တာဆွဲပြောတယ် ဘာဖြစ်လဲ..
စကားမစပ် စာကိုရှာလာပြီး ဘာသာပြန်တုန်းမှာပါ ဆရာလုပ်ပေးလို့ ကျေးကျေး
မာဃ တစ်ယောက် ၀ိုင်းစုခိုင်သိမ်း ဖြစ်နေပုံရပါတယ်…။
ရတာဆွဲယူလိုက်ရသော လူပျိုကြီး အဖြစ်မျိုး မကြုံပဲ
စိတ်ကြိုက် လက်တွဲဖေါ်ကို ရွေးချယ်နိုင်သောသူ ဖြစ်ပါစေ…။
လူပျိုကြီးက ဘာမှ မယူနိုင်လို့ လူပျိုကြီး ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလား ဟင်
အဲ့ဒါကြောင့် နင့်ကို ဆုတောင်းပေးထားတာပေါ့ လူပျိုကြီးရယ်…။
.Chance နဲ့ Choice မှာ ….
.Choice ကပိုအရေးပါသဗျ….ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အရာရာကို Choice လုပ်နေကြရတာကလား
မchoice လို့လည်း မဖြစ်တော့
မမှားအောင် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစားနေရတယ်
ငါ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ချစ်ရမယ့်သူဟာ
.ဟော. . .
မင်္ဂလာဒုံမှာ နှင်းတွေ ဝေနေပြီ။
ကျိုက်ကလော့ စေတီပေါ်က ဆည်းလည်း ခတ်သံတွေ တချွင်ချွင်ကြားရ
သူဆွတ်ထားတဲ့ စံပယ်ပန်းရနံ့ ရေမွှေးလေး
တကယ်ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ကျမှုကို အံတုပြီး ငြင်းဆန်ချင်သေးတယ်. . .
မဖြစ်နိုင်မှန်းးး သိနေပြီဆိုမှတော့. .
ကွယ်. . . .
ဒါလဲ နင့်ရဲ့ choice ပဲလေ ကွီ
My choice is still right.. :-)
အဲ့ စကားလုံးကို ဘဇာကြောင့် သုံးထားသနည်း :loll:
နာ တို့လို့ ရွေးချယ်စာတွေ များလွန်းတဲ့ လူ ကျ
နာတို့ကတော့ အရွယ်နည်းနည်းလွန်လာတော့ Choice စရာ ရှားလာသဟ ၊
ဒီတော့ လှစ်ကနဲရောက်လာတတ်တဲ့ Chance ကလေးကိုပဲ
တစ်ခါတည်း Choice ပလိုက်ဦးမှပါ ၊ ဟီး ဟီး
အချစ်နဲ့ စစ်မှာ မတရားတာ မရှိ ဆိုလား
သိဘူးဟေ့ သိဘူး ဘာမှ သိဘူး
ခံစားချက်တွေ ဘလာ….ဘလာ …..
No Feeling…. :loll:
money တွေ trip တွေ
အဲ့လာ တစ်​ချိန်​က ဆတ်​ (ယွန်း​ပေါဆတ်​- ပြင်​သစ်​ ဖီလိုဆိုဖာ ) ရဲ့ အတ်​ဇစ်​ စတင်းရှယ်​ လစ်​ဆင်​နဲ့ ခပ်​ဆင်​ဆင်​ပဲ ။ ဆို​တော့ကာ အဲ့ အယူအဆက အသစ်​ ဂျပ်​ရွှပ်​ မဟုတ်​ဘူး လို့ပဲ ခံစားရတယ်​ ။ လူ​ဒွေဟာ သ​ဘောတရား ​ရေးရာ မှာ ပါးစပ်​က အမြှုပ်​ထွက်​​အောင်​ ​ပြော​နေကြပါရဲ့ ။ လက်​​တွေ့ မှာ​တော့ သိပ်​မဟုတ်​လှ ပါဘူး ။ ဆိုတဲ့ မြန်​တျာန်​ပြင်​ညာရှင်​ဂျီး ​နေ၀န်းနီ ရဲ့ အဆိုကို ​ဖောက်​ထွက်​ မသွားနိုင်​​သေးပါဘူး ။
အာ့ကြောင့် လက်တွေ့ စွံ နေတဲ့ ကျော် တို့ လို လူမျိုးဟာ
ဒီ မစွံ တဲ့ သူတွေ သီဝရီတွေနဲ့ ပြောသလို ပြောလေ့မရှိပါ။
ပါစင်နယ် မပါဂျေး ပါစင်နယ် မပါဂျေး
ငါတော့ နှစ်ခုလုံးနဲ့ တိုက်ဆိုင်ခဲ့
ဗာလှဲကွ.. ရယဉ်တီးပစ်လိုက်ပေါ့စ်.. လွတ်သွားဒေ့ါလဲ လွတ်တဲ့ငါး ကြီးမနေနဲ့.. နောက်ဒဂေါင်လျှာ
“လဲရင် ပြန်ထ ဒါ ဘဝ” ပေါ့လေ…
ဟိတ် ဘာပဲပြောပြော တို့ကတော့ Choice ပြီးပြီမို့ CHANGE ချင် CHANGE ၊ မ CHANGE ချင်နေ၊ CHOICE လိုက်ပြီပဲ…
ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးလို့ အကောင်အထည်ပါ ဖော်ပြီးနေပကိုး….
ရရင်ယူ မရမယူနဲ့ပေါ့အေ.. ဒါညား ရှုပ်ရှက်ခပ်နေတာဘဲ.. သွားဘီ
“ရရင်ရ မရရင်ချ” လို့ ပြောမသွားတာ…
တချို့ multiple choice မေးခွန်း တွေလို
all of the above option လေးများ မရှိဘူးလားဟင်…
အာ့ဆို chance, choice အပြင် CHANGE ပါ ပါသွားတာပေါ့။
အသာလုပ်ပါ ကိုရင်ဂျက် ရယ်…
all of the above တော့ မလုပ်ပါနဲ့
winner, 1st runner up, 2nd runner up လောက်ဆို တော်သေး
Chance ရှိမှ Choice လုပ်နိုင်မှာပါ။
Choice လုပ်မှ Change ဖြစ်မှာပေ့ါ။
chance ကို မျှော်ရင်း choice ကို တွေးပြီး change ဖို့က